RASMI: UEFA oo ku dhawaaqday in aalada VAR loo adeegsan doono Champions League iyo xiliga sida rasmiga ah loo dhaqan galin doono – Gool FM
(Yurub) 03 Dis 2018. Xiriirka Kubadda Cagta Yurub ee (UEFA) ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday in muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR la adeegsan karo tartanka Champions League xili ciyaareedkan, wuxuuna si rasmi ah u bilaabmi doonaa kulamada soo aadan ee wareega siddeed dhamaadka, ee la ciyaari doono bisha February.
UEFA ayaa ku daabacday website-keeda rasmiga ah bayaan ay soo saartay, waxayna xaqiijiyeen in muuqaal caawiyaha garsoorka ee loo yaqaano VAR la adeegsan karo laga bilaawo kulamada semi-finalka ee tartanka Champions League xili ciyaareedkan.
Go’aanka Xiriirka Kubadda Cagta ee qaarada Yurub ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii lagu guuleestay isku dayga ay sameeyeen gudiga garsoorka tan iyo bilawga xili ciyaareedkan.
UEFA ayaa xaqiijisay in aalada VAR si toos ah looga adeegsan doono tartanka Champions League xili ciyaareedka soo socda ee 2019/2020 kadib markii la diiday xilli ciyaareedkan.
Xiriirka Kubadda Cagta ee qaarada Yurub ayaa sidoo kale sheegay in aalada VAR laga isticmaali doono koobka Euro ee 2020.